I-United States ingathola ukwanda kwe-2ºC ngaphambi komhlaba wonke | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izwe laseMelika lingahlangabezana nokwanda kwama-2 degrees Celsius noma ngaphezulu eminyakeni embalwa ngaphambili kunaleyo yonke iplanethi, okwenza kube njalo ezweni lokuqala lapho imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu izobonwa ngaphambilini.
Lokhu kuvezwa ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i-PLOS One, olwenziwe nguRaymond Bradley no-Ambarish Karmalkar, base-University of Amherst, abaxwayisa ngokuthi isamba samazwe angama-48 sizonqoba umkhawulo we-degrees ezimbili ngaphambi kokufika ku-2050.
Ukulingisa okwenziwa ngamakhompiyutha, okubhekele amazinga okushisa aqoshwa ngenyanga kaDisemba wangonyaka odlule, kukubikezela lokho izindawo ezisuka eNew York ziye eBoston, okuyindawo enabantu abaningi engxenyeni esenyakatho-mpumalanga yezwe, angabhalisa amanani ama-3 degrees uma izinga lokushisa eliphakathi komhlaba lenyuka ngo-2ºC. Ama-degrees Celsius amabili "yisithiyo" abaholi abazibophezela ukusidlulisa ngokusayina iSivumelwano SaseParis, kodwa uma lokhu kuqhubeka, kungenzeka banqotshwe.
Imephu yokushisa yomhlaba abacwaningi abayisebenzisile njengereferensi bathole ukushisa ngokweqile kwezinye izindawo zomhlaba, ikakhulukazi ezindaweni ezibandayo njenge-Arctic. Lapho, amazinga okushisa ekwindla edlule angaphezu kuka-20ºC ngaphezu kokujwayelekile abhalwa. Yize kwakungebona bodwa ababenesizini efudumele kunaleyo ejwayelekile.
Isithombe - Ambarish V. Karmalkar noRaymond S. Bradley
Impumalanga ye-United States neCanada, i-Australia eseningizimu, nezingxenye ezahlukahlukene zaseChina naseMongolia nakho kubhekene nokwanda okuphawulekayo emazingeni okushisa. Abaphenyi baxwayisa ukuthi »Umehluko emazingeni okushisa phakathi kobukhulu bomhlaba nezilwandle kuzoholela ezifundeni eziningana zasenyakatho komhlaba ukuzwa ukufudumala okungaphezu kweplanethi".
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Izwe laseMelika lingahlangabezana nokwanda kwama-2ºC ngaphambi komhlaba wonke